Kuratidza zvinyorwa neelebheri Elbe kumafuro
Labská louka naEbheri spring
Labská louka (Elbe Meadow) - inzvimbo yepamhepo yewavy chimiro chiri munzvimbo yekumaodzanyemba kweMakomo eGiant munzvimbo dzakakwirira dzinosvika 1350 kusvika 1400 metres.
Iko kunzvimbo yekumusoro kwechokuchamhembe kweViolík, iyo iri pamuganhu weCzech-Polish. Kurutivi rwamavirazuva rweRabská louka runoyerera Mumlava rwizi; iri mukati mavo inotora nzvimbo yeElbe pakureba kwe1387 mamita. Elbe inoyerera ichi kuenda kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero uye inobva mumunda uri pedyo naRabská bouda. Kumadokero kwaro ndiyo CHMI yekutsvaga nzvimbo yekuenzanisa kwezone yepasi.
Akapfuura neRabská louka mu16. nzira yekutengeserana yezana remakore remakore inosangana neBohemia neSilesia.
Labská louka inzvimbo ine zvisingawanzo zvinomera izvo zviri chikamu che 1st zone yeKrkonoše National Park (mumakore 1952–2008 mukati meNational Nature Reserve Západokrkonošská, resp. Elbe Springs). Mukuwedzera kune scrub, kune peat bogs uye zvisingawanzo endemic maruva, kusanganisira glacial relics (semuenzaniso Sudeten lice, bhurawu). Chirimwa chinochinjirwa kumamiriro ekunze ekunze - Labe…